Akara Selọọrụ na Embossers maka polọọrụ na LLC
Akara Mgbakọ Ahịa / Embosser mara mma anyị gụnyere na ngwa Koodu na LLC anyị. Ejiri igwe anaghị agba ma dị mfe iji, akara ụlọ ọrụ dịka nke anyị nwere ike ịchọ ọtụtụ steeti maka ụfọdụ azụmahịa.
Iji tụọ Esemokwu poratelọọrụ, biko kpọọ ngalaba ọrụ ndị ahịa Mon-Fri n'etiti 6: 00AM na 5: 00PM Pacific Oge:
Ma ọ bụ ịnwere ike iji nrube ụdị anyị ebe a: Nye iwu ka Akara Ahịa
Sekpụrụ Nhazi ọkọlọtọ - $ 56
Ihe nlere a aghowo nke oma site na nha nke ya na ntinye ya nke di elu nke na enye otutu ihe nlere anya di nma ma nwekwaa ihe nile.
Akara Mkpokọta Desktop - $ 96
Emebere ihe nlele a iji tinye obere nrụgide na obere mgbalị. A na-atụ aro ya nke ọma maka ngosipụta akwụkwọ ọpịpị ugboro ugboro.
Azụmaahịa Azụmaahịa Nke Nrụgide - $ 72
Nnukwu ụlọ ọrụ nke nwere nnukwu ọrụ dị arọ na-enyekwu nwantakịrị ma na-enye ohere maka itinye akwụkwọ nha buru ibu. Ọ dị mma maka akwụkwọ ndị buru ibu buru ibu ma buru ibu.
Akara glọ Akwụkwọ Elegant - $ 96
Ihe eji eme ọmarịcha ihe eji eme ya, ụlọ ihe nkedo nke embosser na-eme nnukwu mgbakwunye na ụlọ ọrụ ma ọ bụ ọfịs ọ bụla. Ndị embossers ndị a na desktọọpụ bụ ihe nkedo ígwè, wee jiri aka rụọ ọrụ wee mepụta elu dị larịị mara mma. Ha dị na ngwụcha epo-mmanụ na-emecha, ọla edo 24K ọla edo na-acha uhie uhie ma ọ bụ ọbụna chrome chụpụrụ.